Isimo: Singabazisa kanjani abangane bethu ukuthi simatasa | Izindaba zamagajethi
Isimo: Singabazisa kanjani abangane bethu ukuthi simatasa
Kukangaki bekushayela ucingo ngenkathi umatasa ngempela? Lolu hlobo lwesimo lungacasula futhi futhi, sibandakanyeke enkingeni ethile uma sizithola siphakathi komhlangano obalulekile futhi ngokungazelelwe, ifoni yethu ephathekayo iqala ukukhala ngokungapheli futhi iphikelele kuze kube yilapho siphendula ucingo .
Into ecasula kakhulu ingenzeka ngokuhamba kwesikhathi, futhi mhlawumbe umngani ushayele nje ukubona ukuthi sinesikhathi sokuphuma siyotheza ingilazi yewayini noma inkomishi yekhofi. Ngeshwa namuhla izingxoxo zezombusazwe azisebenzi ngendlela ebesingathanda ngayo, ngoba uma singaphendula kuphela ucingo olungenayo yazisa ukuthi ngaleso sikhathi simatasa, noma ngubani osishayelayo ngocingo angakuthatha ngendlela engafanele bese edala ukungakhululeki okungenasisekelo. Ukugwema lolu hlobo lwesimo, sincoma ukusebenzisa ithuluzi elithandekayo elibizwa ngokuthi "Isimo", elitholakala kuwo womabili amadivayisi eselula ane-iOS kanye ne-Android futhi lokho kuzosisiza sazise abangane bethu ukuthi ngaleso sikhathi, simatasa ngempela.
Ungasilanda kanjani futhi usifake Isimo kumadivayisi wethu weselula
Besifuna ukuphakamisa leli phuzu lokuqala ngenxa yobunzima obulethwa yileli thuluzi uma kuziwa ekutholeni esitolo esifanele, ngoba ngokuthayipha igama laso kuzovela imiphumela eminingi futhi okungekho kuyo. Ngalesi sizathu, sincoma ukuthi uye kusixhumanisi sesimo, esizokusa kuwebhusayithi yonjiniyela. Khona lapho unezinye izindlela ezimbili ongakhetha kuzo, okungukuthi, Kokubili kwe-iOS okuvela ku-Apple Store futhi, inguqulo ye-Android evela ku-Google Play Isitolo.
Ngokukhetha isithonjana esifanele, ngokuzenzakalela Sizoqondiswa kabusha kuhlelo lokusebenza esitolo esifanele ukulanda nokufaka ngokushesha. Ngemuva kokwenza lo msebenzi nasekuqalisweni kwawo kokuqala, sizothola iwindi lokuqala elizokhombisa ukuthi sizokwenzenjani ngeSimo, esibhekisa ikakhulu ku:
Sizokwazisa abangane bethu lapho sizithola simatasa.
Sizophinde sibe nethuba lokubona ukuthi yibaphi abangane abakhululekile ukuxoxa.
Uma sinohlu "lwabangane abakhulu", yibo kuphela esingabelana nabo lapho sikhona.
Inketho yokuqala esiyibalulile yileyo evame ukusetshenziswa yilabo abasemhlanganweni obalulekile, abashayela imoto, kumamuvi noma bamane ngosuku lokuthandana. Ngaleso sikhathi, akekho umuntu okufanele angabi nandaba futhi aqale ukushaya ucingo kuze kube yilapho ukubekezela kwethu kuphelile ngoba "Isimo" sifake ifoni yethu, noma ngubani obiza u-rUzothola umyalezo omfushane lapho uzokwaziswa khona ukuthi simatasa.
Uma abangani bethu nabo bafakwe "Isimo" kumaselula abo (kungakhathalekile ukuthi uhlelo luni abalusebenzisayo), lapho-ke nathi singazi futhi ukuthi bakhululeke nini ukukhuluma.
Isici sokugcina esikushoyo sithathwa njenge- umsebenzi wangasese osinikeza «Isimo», Hhayi-ke, ngabangani bethu kuphela abazokwazi indawo esikuyo, basebenzise ibalazwe elincane esigungwini.
Isimo sisebenza ngemuva, okusho ukuthi isikhombimsebenzisi sethuluzi akudingeki sibonakale; yithi esingakhetha abangane esifuna ukukhuluma nabo, okusho ukuthi, ucingo olungenayo ngeke luvinjelwe kubo. Sizophinda sibe nethuba lokuhlela lolu hlelo lokusebenza lweselula, ukuze beka umyalezo "omatasa" kuye ngokuthi sikuphi noma isikhathi esithile sosuku. Lokhu kusho ukuthi ngokuthembela kwizinsizakusebenza ezithile zikamakhalekhukhwini, uma ngesikhathi esithile sishayela, ekhaya nomndeni, ngesikhathi esithile ehhovisi noma kalula, ngesikhathi sokudla kwasemini, Isimo sizokwenza ukuthi umakhalekhukhwini wethu rsixhase ngokuzenzakalela ngokungatholakali kwethu ukukhuluma.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Isimo: Singabazisa kanjani abangane bethu ukuthi simatasa
Le duel: PES 2015 vs FIFA 15